March 1, 2020 - CeleLove
သင့်ကို အသက်နဲ့အမျှချစ်တဲ့ ယောကျာ်းဆိုတာ ဒီလိုလက္ခဏာ ( ၅ ) မျိုး ရှိကိုရှိပါတယ် …
March 1, 2020 CeleLove 0
သင့်ကို အသက်နဲ့အမျှချစ်တဲ့ ယောကျာ်းဆိုတာ ဒီလိုလက္ခဏာ ( ၅ ) မျိုး ရှိကိုရှိပါတယ် … အချစ်ဆိုတာ နှလုံးသားချင်း ဆက်နွယ်နေမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတစ်ခုပါ၊ အချစ်ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒီလိုယောကျာ်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရမှာပါနော်..။ သင်ရော ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးလား ။ ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးဆို အရင်ကထက် ပိုလိမ္မာပါတော့နော် […]
၅ ရက်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၃ ခုတွင် မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး လေပြင်းတိုက်နိုင်
၅ ရက်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၃ ခုတွင် မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး လေပြင်းတိုက်နိုင် ၅ ရက်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၃ ခုတွင် မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး လေပြင်းတိုက်နိုင်ပါတယ် … ။ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်က ရွေ့လျားလာတဲ့ လေပွေလှိုင်းတွေရဲ့အရှိန်ကြောင့် မတ်လ ၂ ရက်ကနေ ၆ […]
ဝမ်းချုပ်သူများအတွက် အကြောပြေ ဝမ်းမှန်စေသည့် ကရွတ်ခွေ
ဝမ်းချုပ်သူများအတွက် အကြောပြေ ဝမ်းမှန်စေသည့် ကရွတ်ခွေ ဝမ်းချုပ်သူများအတွက် အကြောပြေ၊ ခါးနာပြေ၍ ဝမ်းမှန်စေသည့် ကရွတ်ခွေနည်းလေးပါ … ။ ထမင်းစားတဲ့အခါမှာ ထမင်းတစ်လုပ်​၊ရေတစ်မှုတ်သောက်တတ်သူတွေ၊ ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါရေကို ဗိုက်တင်းအောင် သောက်တတ်သူတွေဟာ သွေးပြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ စမြင်းခံခြင်းနဲ့ ကိုယ်လက်တောင့်တင်းခြင်း မလုပ်ချင်မကိုင်ချင်အောင် ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း စတာတွေခံစားရလေ့ရှိတတ်ပါ တယ် …. […]
ည အိပ်ယာဝင် (၇) ခေါက် ရွတ်ပြီးအိပ်က လောကီအစီအရင် စုန်း နတ် ပယောဂ ကင်းစေသည့်ဂါထာတော်
ည အိပ်ယာဝင် (၇) ခေါက် ရွတ်ပြီးအိပ်က လောကီအစီအရင် စုန်း နတ် ပယောဂ ကင်းစေသည့်ဂါထာတော် သင်္ဂင်္ဟ ဂါထာ (သ်ို့ ) ဝေ ဒါ သာ ကု ဤဂါထာတော်ကြီး ကို မန္တလေးတိုင်း အမရပူရ မြို့ သတ္တမမြောက် ကျော်အောင်စံထား […]
စာမေးပွဲဖြေကာနီးမှာ ထီ သိန်းတစ်ထောင် ကံထူးသွားတဲ့ (၁၀)တန်းကျောင်းသူလေး ပခုက္ကူကိုင်းရွာကဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးမခင်သန္တာထွန်း ၁၃ ကြိမ် မြောက်သိန်း1000ကံထူးရှင် ဖြစ်ပါတယ် …. ။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးကိုလဲဂုဏ်ထူးများစွာဖြင့်အောင်မြင်ပါစေ …. ။ ရွှေတန့်တစ် သရက္ခန် ဘုရားကဒေါ်မာမာမြင့် မိုးယံရွှေလမင်းနှင့်မြတ်ဆုကုဋေထီဆိုင်ကဆွတ်ခူးပေးလိုက်ပါပြီနော် …. ။ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ် … ။ နောက်လဲ […]
အိမ်ထောင်သက်တမ်း(၆)နှစ်ကျော်မှာ ခင်ပွန်းနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း(ရုပ်သံ)
အိမ်ထောင်သက်တမ်း(၆)နှစ်ကျော်မှာ ခင်ပွန်းနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း(ရုပ်သံ) အဆိုတော် ရေဗက္ကာဝင်းကတော့ ခင်ပွန်းနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်တာ (၃)လကျော်လောက် ရှိပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ရေဗက္ကာဝင်းက လက်ရှိ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။ ယခင်က အင်တာဗျူးတွေမှာ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတိအကျ ပြောပြလို့ […]
အသက်ကိုမမှု ငွေသိန်းရာချီကောက်ရပေမဲ့ ပိုင်ရှင်ထံပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ဆိုက်ကားဆရာ ဦးစန်းဝင်း
အသက်ကိုမမှု ငွေသိန်းရာချီကောက်ရပေမဲ့ ပိုင်ရှင်ထံပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ဆိုက်ကားဆရာ ဦးစန်းဝင်း ငွေသိန်းရာချီကောက်ရသော်လည်း လိုချင်တပ်မက်စိတ်မရှိဘဲ အသက်ကိုမမှုဘဲ ပိုင်ရှင်ထံပြန်ပေးခဲ့သူတစ်ဦးအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်…သူကတော့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို.၊ နဝန်းကမ်းနားလမ်းနေ ဦးစန်းဝင်း(ဆိုက်ကားဆရာ၊ နိဗ္ဗာန်ဆော် ) ဆိုက်ကားနံပါတ်- ၁၆၆၁ ဖြင့်ဆိုက်ကားနင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်…ဆင်းရဲပြီး အကျီအနွမ်းလေးဝတ်၊ ဦးထုပ်အဟောင်းလေးဆောင်းပြီး နေပူပူမှာ ဘ၀၀မ်းစာရေးကိုဖြေရှင်းနေရတာပါ…. ပြီးခဲ့တဲ့ (၃၀) ရက်နေ့ […]
သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို အံ့ဩဖွယ်ဆွတ်ခူးခဲ့ပုံ ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ယခုလ ကံထူးရှင် မိသားစု
သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို အံ့ဩဖွယ်ဆွတ်ခူးခဲ့ပုံ ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ယခုလ ကံထူးရှင် မိသားစု မတ်(၁) AlinnMyay(အလင်းမြေ) ဆယ်စောင်တွဲထီကို ထီထိုးတဲ့သူက ငါးစောင်ထိုးတာ ကျန်တဲ့ငါးစောင်ကနေ ပေါက်ခဲ့တာပါ …။ ၂၀၂ဝခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှာ ဖွင့်လှစ်တဲ့ (၁၃) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုကြီးကို […]
ပျိုမေတို့သိထားဖို့ ဘဝမှာ ‘အချစ်’ထက် အရေးပါတဲ့ အရာ(၇)မျိုး
ပျိုမေတို့သိထားဖို့ ဘဝမှာ ‘အချစ်’ထက် အရေးပါတဲ့ အရာ(၇)မျိုး ယောက်ျားလေးတွေ ဆိုတာ သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်စေ ချစ်သူပဲ ဖြစ်စေ၊ မကောင်းတာ ချည်းပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကို တစ်ခါတစ်ရံ ပျော်ရွှင်စေနိုင်သလို အားကိုးရတဲ့ သူတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် တချို့မိန်းကလေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေအပေါ်မှာ […]
မန္တလေးမှာ ဖုန်းကောက်ရတဲ့ မိန်းကလေးက ဖုန်းပိုင်ရှင်ကို ငွေညှစ်တာမရလို့ ဖုန်းလုနေပါတယ်လို့ ပြန်ပြီး စွပ်စွဲအော်ဟစ်(ရုပ်သံ)
မန္တလေးမှာ ဖုန်းကောက်ရတဲ့ မိန်းကလေးက ဖုန်းပိုင်ရှင်ကို ငွေညှစ်တာမရလို့ ဖုန်းလုနေပါတယ်လို့ ပြန်ပြီး စွပ်စွဲအော်ဟစ်(ရုပ်သံ) ဒီမိန်းကလေးကို သတိထားကြပါ။ နောက်ထပ်လူတွေ ဒီလို မလုပ်ရဲအောင် မျှဝေပေးပါ …။ မန္တလေးမှာ ဖုန်းကောက်ရတဲ့ မိန်းကလေးက ဖုန်းပိုင်ရှင်ကို ငွေညှစ်တာမရလို့ ဖုန်းလုနေပါတယ်လို့ ပြန်ပြီး စွပ်စွဲအော်ဟစ်ပြုမူခဲ့ပါတယ် …။ ဖေဖော်ဝါရီလ […]